မျက်နှာပေါ်က အရောင်များ | Layma's World
Posted on June 27, 2007 by layma
အရောင်လောကကြီးထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ “ လေးမ ” တို့လူသားတွေရဲ့ မျက်နှာတွေမှာလည်း အရောင်တွေရှိကြတယ်……..။ သတိထားမိပါသလား……။ စိတ်ခံစားမှုကြောင့် မျက်နှာမှာ အရောင်တွေ ပြောင်းသွားတတ်တယ်……..။ အသားဖြူတဲ့ လူတစ်ယောက် ဒေါသထွက်နေရင် သူ့ မျက်နှာက အနီရောင်တောက်တောက်…….၊ အသားမည်းတဲ့ သူ ဒေါသထွက်ရင်တော့ အမည်းရောင်……..၊ မဟုတ်တာလုပ်ထားတာ လူမိသွားတဲ့ သူကတော့ ညိုပုပ်ပုပ်…….၊ ပီတိနဲ့ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်တဲ့ အခါ ပန်းနုရောင် ……..၊ ရှက်ဒေါသ ဖြစ်တဲ့အခါ အနီရောင် ( ဖျော့ဖျော့ )…….၊ သွေးပျက် စရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ဖြူဖျော့ဖျော့……..၊ အလိုမရှိတဲ့သူနဲ့ဆုံတဲ့အခါ မျက်လုံးနဲ့မျက်နှာထားက ခပ်စိမ်းစိမ်း…….. ။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ၊ ရာသီဥတု နဲ့တခြားအကြောင်း အရာတွေ ကြောင့်လဲ မျက်နှာ အရောင်ပြောင်းတတ်ပါတယ်……..။ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့အခါ နဂို အသားရောင်ရဲ့ ဖျောတောတောအရောင်……..၊ အရက်သောက်ထားတဲ့အခါ အနီ…….၊ နေပူရင် ပန်းသွေးရောင်…….နေပြင်းရင်တော့ အနီရောင်……၊ ငိုထားရင် အနီရောင်ပုပ်ပုပ်…….၊ ဒီလိုဘဲ ရယ်လွန်းရင်……ချမ်းလွန်းရင်……..မိုးရွာရင်…. ပျော်လွန်းရင်…… ။ ဘယ်ချိန်မှာ ဘာရောင်တွေ ပြောင်းကုန်တယ်ဆိုတာ မသေချာပေမယ့်…….. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်ပေမယ့်……. မျက်နှာပေါ် က အရောင်တွေ ပြောင်းလဲ နေတတ်တာကတော့ သေချာပါတယ်……။ ကိုယ့်မျက်နှာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာအရောင် ပြောင်းသွားလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ မှန်ရှေ့မှာ စမ်းသပ်ကြည့် လိုက်ပါ………( အပူလား…အအေးလား….အလင်းလား….အမှောင်လား ?) ။ ။
« အရောင်များ ဗိသုကာ ကျောင်းသူဘ၀…အဲသလိုစခဲ့တယ်… »
သာမီး, on June 27, 2007 at 2:17 pm said:
အမျိုးသားများ မဖတ်ရဆိုလို့ အမျိုးသမီးယောင်ဆောင်ပြီး ၀င်လာလိုက်တယ် …ခိ..ခိ…မမ ကလည်း သာမီးကမိန်းခလေးဆိုတော့အရောင်တွေသိဖို့လိုတယ်လေ..ဟုတ် …ခု သာမီးသိသွားပီ… ခိ… ကျေးဂျူးပါရှင် … ခွိ့…
Layma, on June 28, 2007 at 5:25 am said:
ညည်းဘယ်သူလဲ……ငါ့ကမ္ဘာကို ရုပ်ဖျက်ပြီးတော့ ၀င်လာတယ်ပေါ့……I am the queen ဆိုတာသိတယ်မို့ လား……သတိထား….
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်, on July 1, 2007 at 10:06 am said:
မလေးပြောမှပဲ အရောင်တွေကို သတိထားမိတော့တယ်
သေချာမှန်ထဲကြည့်ကြည့်လိုက်အုံးမယ် … ဟိဟိ
Layma, on July 3, 2007 at 12:45 pm said:
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရေ…..မှန်ရှေ့မှာ…ဒေါသထွက်လိုက်….ရယ်ကြည့်လိုက် နဲ့စမ်းသပ်တော့မယ်ဆိုရင်….အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေနဲ့ နော်….
မေ, on February 24, 2009 at 4:59 pm said:
လေးမတယောက် ဘယ်တုန်းကများ အလှပြင်တာကို စိတ်ဝင်စားသွားတာပါလိမ့်?????